एमाले बिभाजन तयारी : केपी ओली भन्दा माधबकुमार नेपाल झन् शक्तिशाली - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
एमाले बिभाजन तयारी : केपी ओली भन्दा माधबकुमार नेपाल झन् शक्तिशाली
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले औपचारिक बिभाजन हुने लगभग तयारि पुरा भैसकेको छ । करिव बहुमत नजिक भएको एमाले माओबादीसँग पार्टी एकता गरेर करिव दुई तिहाइ जनमत पाएको नेकपा बनेको थियो । रातारात एमालेसँग माओवादीको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको संयुक्त गठबन्धन पार्टी एकतामा प्रवेश गर्दै अन्ततः अदालतको आदेशले विभाजन गरेको थियो । अदालतको आदेशले नेकपा विभाजन भइ एमाले-माओबादी पूर्ववत अबस्थामा फर्किएका थिए ।
एमालेमा पार्टी नेतृत्वले पेलेर गएपछि माधब-झलनाथ समुहले देशभर समानान्तर कमिटी बनाएर नयाँ पार्टी दर्ता थालेपछि एमाले अब बिभाजन हुनबाट नरोकिने भएको छ । कानुनी रुपमा एक पार्टी नै भएपनि एमाले अनौपचारिक रुपमा भने ४ महिना अगाडी नै बिभाजन भैसकेको छ । बिगत ३ महिनादेखि ओली र नेपाल समुहले आ-आफ्नो समुहको बैठक राख्ने गरेका छन् । नेकपा एमालेमा शक्तिसंघर्ष चरम बिन्दुमा पुग्दा औपचारिक रुपमा विभाजन हुनमात्र बाँकी छ ।
उता ओलीले आफ्ना विरोधीहरुलाई पार्टी निष्काशनको अभियान नै चलाएका छन् भने यता निष्काशित हुनेहरु आफ्नो रौ समेत नहल्लिने भन्दै पार्टीभित्र शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा माधब समुहले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई समर्थन गरेको र राष्ट्रियसभाको उप-निर्वाचनमा एमाले उमेदवार रामबहादुर थापालाई मतदान नगरेर हराएपछि पार्टी बिभाजन हुनेतर्फ प्रष्ट संकेत मिलेको देखिन्छ । एमालेभित्र २ जेठ २०७५ को अगाडिकै अवस्थामा एमाले सञ्चालन हुनुपर्ने माधव-झलनाथ पक्षको अडान छ भने जे जसरी अहिले चलिरहेको छ त्यहि अनुरुप चल्नुपर्ने ओली पक्षको अडान छ ।
यसमा अब सहमतिको सम्भाबना लगभग समाप्त भैसकेको छ । श्रोतका अनुसार माधब नेपाल र झलनाथ खनाल समुहले पहिले नै पार्टी विभाजन गर्ने तयारीसहित दल दर्ता गरिसकेकोले अब कारवाही प्रक्रियामा रहेकालाई कारवाही गर्ने बित्तिकै पार्टी बिभाजन हुने छ । बिभाजनको लागि एमालेभित्र दुबै पक्ष तयारी अबस्थामा नै छन् । करिव ४० महिना प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई सत्ताबाट सबै विपक्षीहरु एकजुट हुँदा पनि हटाउन सकेका छैनन् भने ओलीले दुई पटक संसद बिघटन गरेर सम्भवत बिश्व किर्तिमान समेत राखिसकेका छन् ।
यदि एमाले बिभाजन भए ओली र नेपालको पार्टीमा कुन बलियो होला ? कतै नेपालको पार्टी ५६ को माले बन्ने त होइन ? कतै ओलीको पार्टी ५६ को माले त बन्ने होइन ? अहिले दुबै पक्ष आफु बलियो हुने दावी गरिरहेका छन् भने एकले अर्कोलाई माले बन्ने दावी गरिरहेका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित पदाधिकारीलाई आधार मान्ने हो भने ओलीसँग निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये ६ जना मात्र छन् भने माधबसँग बाकि सबै छन् । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी छिन् भने बामदेव गौतमले पार्टी बिभाजन भए माधव-झलनाथको पार्टीमा जाने बताइसकेका छन्।
अहिले एमालेभित्र ओलीको एकछत्र राज भएपनि त्यो बिस्तारै निस्तेज हुने अबस्थामा छ । ओलीसंग इश्वर पोख्रेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहित शिर्ष तहका थोरै मात्र नेता छन् भने शेरधन राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग , शंकर पोखरेल, डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन् । यता माधव नेपालसँग झलनाथ खनाल,वामदेव गौतम, भिम रावल,अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत शिर्ष नेताहरु रहेका छन् । ओली समुहमा ओलीपछि ओली समूहबाट एमालेको भावी नेतृत्वको दाबेदारमा इश्वर पोखरेल मानिन्छ भने माधव समुहमा माधवपछि भिम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,योगेश भट्टराई,राजेन्द्र पाण्डेलगायत अरु समेत धेरै छन्। पार्टी बिभाजन भए आम नेताकार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य तद्कालको लागि ओली समुहमा राम्रो भएपनि दीर्घकालीन अस्थित्व भने माधव समुहमा मात्रै सम्भव हुने निकट श्रोत बताउछ ।
एमालेभित्रको सम्भावित विभाजनबाट प्रत्यक्ष लाभ नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्रले लिनसक्छ । जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजनको संघारमा भएकाले चुनावी नतिजा सोचेभन्दा निकै फरक हुन सक्ने देखिन्छ । माधब समुह तद्काल प्रचण्ड नेतृत्वको माओबादीसँग पार्टी एकता नगर्ने तर चुनावी तालमेल गरेर जाने तयारीमा रहेको श्रोत बताउँछ । श्रोत भन्छ, जसपा बिभाजन भएमा ओली एमालेसंग महन्त-राजेन्द्र चुनावी तालमेल हुनेछ भने यता माओबादी माधव समुहको पार्टी र बाबुराम-उपेन्द्र समुहबीच चुनावी तालमेल हुनेछ । एमालेको तल्लो निकायमा माधव नेपालको प्रभाव बलियो नै रहेको छ ।
विशेषगरी बागमती प्रदेश र तराईका जिल्लाहरुमा नेपालको प्रभाव अत्यन्त राम्रो रहेको छ । एमाले र जसपा फुटेमा ओलीले सोचेभन्दा परिणाम निकै फरक आउन सक्छ भने काँग्रेसलाई विगतमा भन्दा केही मत वृद्धि गर्ने अवसर बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर र देशको शक्तिशाली सबैधानिक निकायमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएर सत्ता कब्जा गरे पनि ब्यालेटको राजनीतिमा भने ओलीलाई जित हासिल गर्न अहिले प्रचार गरेजस्तो त्यहि सजिलो भने छैन ।
माधव समुहको तद्काल माओबादीसँग एकता नहुने भन्दै श्रोत भन्छ-अहिले माओबादीसँग एकता गरेर जाँदा पहिले झैँ धेरै असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तर एमाले फुट्ने पक्का छ । आम नेताकार्यकर्ता समेतको मनोभावना बुझेर मात्र पछि पार्टी एकता हुनसक्छ भने नबुझी गरेको खण्डमा त्यो पार्टी नेकपाको जस्तै हालत हुनेछ । माधब समुहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत र चुनाब चिन्ह कलम राख्ने तयारीसहित निर्वाचन आयोगमा आफु निकट युवाको टोलि परिचालन गरिसकेको छ ।
अहिले माओबादीसँग पार्टी एकता भए आम नेताकार्यकर्ता ओली समुहमा जाने खतरा बढेको भन्दै माधव समुह अहिले नै एकीकरणमा नजाने निष्कर्षमा पुगेको छ । उनीहरु ओली बाहेक बाबुराम-उपेन्द्र हुँदै विप्लब र बैद्यसम्म अटाउने गरि पार्टी एकता गरेर जानसक्नेतर्फ पनि छलफल र तयारी गरिरहेको श्रोतको दावी छ । अब एमाले पुनर्मिलनको ढोका बन्द भैसकेको दुबै पक्षले निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।